China Galvanized steel ဝါယာကြိုးကြိုး 7*7 1.5mm 2.0mm 3.0mm Clothesline ကြိုးကြိုး ထိန်းချုပ်ကြိုး စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Bangyi
သွပ်ရည်စိုစတီးလ်ကြိုး 7*7 1.5mm 2.0mm 3.0mm Clothesline ကြိုးကြိုး ထိန်းချုပ်ကြိုး
စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်သွပ်ရည်စိမ်ထားသောစတီးဝိုင်ယာကြိုး ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ တာရှည်ခံ၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ သံချေးတက်ရန်မလွယ်ကူ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိသော၊ ချောမွေ့ပြီး burr-free- လက်ရာမြောက်သော၊ အလွှာလိုက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ သုံးစွဲသူများအတွက် ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်၊
1. အမြင့်ဘက်မြင်တိကျမှု၊ ±0.01mm အထိ၊
2. Excellent ကမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့်ကောင်းသောတောက်ပ;
3. ၎င်းတွင်ခိုင်မာသောချေးခုခံမှု၊ မြင့်မားသောဆန့်နိုင်စွမ်းအားနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခုခံမှုရှိသည်။
4. ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု တည်ငြိမ်သည်၊ သံမဏိသည် သန့်စင်ပြီး ပါဝင်သည့် ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်။ထုပ်ပိုးမှုမှာ နဂိုအတိုင်းဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာသည်။
5. သွပ်ရည်စိမ်ထားသောစတီးလ်ကြိုးကို အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသံမဏိ၊ 60# 65# 70# စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်ကို ပူပြင်းသောသွပ်ရည်စိမ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်နိုင်သည်။
6. သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးထုပ်ပိုး: သစ်သားဘီးထုပ်ပိုး, အပျော့လိပ်ထုပ်ပိုး။
7. ဝါယာကြိုးအပလီကေးရှင်း- ၎င်းတွင် မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖောက်ထွင်းမှုစွမ်းအား၊ တာရှည်ခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုစသည့် ဝိသေသလက္ခဏာများစွာရှိသည်။ကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံ၊ သတ္တုဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောများ၊ တံတားများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ရော်ဘာ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ရေထိန်းသိမ်းမှု၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်များသည် ISO၊ BS၊ DIN၊ JIS၊ ABS၊ LR စသည်ဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
1*7၊7*7 (6*7 + FC၊ 6*7 + IWS၊ 6*7 + IWRC)၊
၁*၁၉၊7*19 (6*19+FC၊ 6*19+IWS၊ 6*19+IWRC)၊
DIN၊ EN၊ ABS၊ BS၊ JIS၊ LR စသဖြင့်
အချင်း(မီလီမီတာ) GB/T 20118-2006
GB 8918-2006 အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန်
KG/100M EN 12385-4 အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန်
မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN) မင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (KN)
1770 N/MM² 1960 N/MM² 1770 N/MM² 1960 N/MM²
၀.၃ ၀.၀၉ ၀.၁၀ ၀.၀၅ — — —
၀.၄ ၀.၁၅ ၀.၁၇ ၀.၀၈ — — —
၀.၅ ၀.၂၄ ၀.၂၆ ၀.၁၃ — — —
၀.၆ ၀.၃၄ ၀.၃၈ ၀.၁၉ ၀.၃၀၈ ၀.၃၄၇ ၀.၁၈
၀.၇ ၀.၄၇ ၀.၅၂ ၀.၂၅ — — —
၀.၈ ၀.၆၁ ၀.၆၈ ၀.၃၃ ၀.၅၄၇ ၀.၆၁၇ ၀.၃၂
1 ၀.၉၆ ၁.၀၆ ၀.၅၂ ၀.၈၅၅ ၀.၉၆၃ ၀.၅၀
၁.၂ ၁.၃၈ ၁.၅၂ ၀.၇၅ — — —
၁.၅ ၂.၁၅ ၂.၃၈ ၁.၁၇ ၁.၉၂ ၂.၁၇ ၁.၁၃
၁.၈ ၃.၁၀ ၃.၄၃ ၁.၆၈ — — —
2 ၃.၈၂ ၄.၂၃ ၂.၀၈ ၃.၄၂ ၃.၈၅ ၂.၀၁
၂.၅ ၅.၉၇ ၆.၆၂ ၃.၂၅ ၅.၃၄ ၆.၀၂ ၃.၁၄
3 ၈.၆၀ ၉.၅၃ ၄.၆၈ ၇.၆၉ ၈.၆၇ ၄.၅၂
4 ၁၅၊၂၉ ၁၆.၉၃ ၈.၃၂ ၁၃း၇၀ ၁၅း၄၀ ၈.၀၃
5 ၂၃.၉၀ ၂၆၊၄၆ ၁၃း၀၀ ၂၁း၄၀ — ၁၂း၆၀
6 ၃၄.၄၁ ၃၈.၁၀ ၁၈.၇၂ 30.80 — 18.10
၀.၈ ၀.၆၀ ၀.၆၆ ၀.၃၂ — — —
1 ၀.၉၄ ၁.၀၄ ၀.၅၁ ၀.၈၂၅ ၀.၉၃ ၀.၅၀
၁.၂ ၁.၃၅ ၁.၅၀ ၀.၇၃ ၁.၁၉ ၁.၃၄ ၀.၇၁
၁.၄ ၁.၈၄ ၂.၀၄ ၀.၉၉ — — —
၁.၅ ၂.၁၁ ၂.၃၄ ၁.၁၄ ၁.၈၆ ၂.၀၉ ၁.၁၁
၁.၈ ၃.၀၄ ၃.၃၇ ၁.၆၄ — — —
2 ၃.၇၅ ၄.၁၆ ၂.၀၃ ၃.၃၀ ၃.၇၂ ၁.၉၈
၂.၅ ၅.၈၆ ၆.၄၉ ၃.၁၇ ၅.၁၅ ၅.၈၁ ၃.၁၀
3 ၈.၄၄ ၉း၃၅ ၄.၅၆ ၇.၄၂ ၈.၃၇ ၄.၄၆
၃.၅ ၁၁.၄၉ ၁၂.၇၃ ၆.၂၁ ၁၀.၁ ၁၁.၄ ၆.၀၆
4 ၁၅.၀၁ ၁၆.၆၂ ၈.၁၁ ၁၃.၂ ၁၄.၉ ၇.၉၃
5 ၂၃.၄၅ ၂၅.၉၇ ၁၂.၆၈ 20.6 ၂၃.၂ ၁၂း၄၀
6 ၃၃.၇၇ ၃၇း၄၀ ၁၈.၂၅ ၂၉.၇ ၃၃.၅ ၁၇း၈၀
7 ၄၅.၉၇ ၅၀.၉၀ ၂၄.၈၄ ၄၀.၄ ၄၅.၆ ၂၄.၃၀
8 ၆၀.၀၄ ၆၆.၄၈ ၃၂း၄၅ ၅၂.၈ ၅၉.၅ ၃၁၊၇၀
၁.၂ ၀.၉၂ ၁.၀၁ ၀.၅၆ ၀.၉၉ ၁.၁၀ ၀.၅၆
၁.၄ ၁.၂၅ ၁.၃၈ ၀.၇၆ ၁.၃၅ ၁.၄၉ ၀.၇၆
၁.၅ ၁.၄၃ ၁.၅၈ ၀.၈၇ ၁.၅၅ ၁.၇၁ ၀.၈၇
၁.၈ ၂.၀၆ ၂.၂၈ ၁.၂၅ ၂.၂၃ ၂.၄၆ ၁.၂၅
2 ၂.၅၄ ၂.၈၁ ၁.၅၅ ၂.၇၅ ၃.၀၄ ၁.၅၅
၂.၅ ၃.၉၇ ၄.၄၀ ၂.၄၂ ၄.၂၉ ၄.၇၅ ၂.၄၂
3 ၅.၇၂ ၆.၃၃ ၃.၄၈ ၆.၁၈ ၆.၈၄ ၃.၄၈
၃.၅ ၇.၇၈ ၈.၆၂ ၄.၇၄ ၈.၄၁ ၉.၃၂ ၄.၇၄
4 ၁၀.၁၇ ၁၁.၂၆ ၆.၁၉ 10.99 12.17 ၆.၁၉
၄.၅ ၁၂.၈၇ ၁၄.၂၅ ၇.၈၄ ၁၃.၉၁ ၁၅း၄၀ ၇.၈၄
5 ၁၅.၈၉ ၁၇.၅၉ ၉.၆၈ ၁၇၊၁၇ 19.01 ၉.၆၈
၅.၅ ၁၉.၂၂ ၂၁၊၂၉ ၁၁.၇၁ ၂၀.၇၇ ၂၃.၀၀ ၁၁.၇၁
6 ၂၂.၈၈ ၂၅.၃၃ ၁၃.၉၃ ၂၄.၇၂ ၂၇း၃၈ ၁၃.၉၃
7 ၃၁၊၁၄ ၃၄၊၄၈ ၁၈.၉၆ ၃၃.၆၅ ၃၇.၂၆ ၁၈.၉၆
8 ၄၀.၆၇ ၄၅.၀၃ ၂၄.၇၇ ၄၃.၉၅ ၄၈.၆၇ ၂၄.၇၇
3 ၅.၂၉ ၅.၈၆ ၃.၆ ၅.၇၇ ၆.၃၉ ၃.၆
၃.၂ ၆.၀၂ ၆.၆၆ ၄.၁ ၆.၅၆ ၇.၂၇ ၄.၁
၃.၅ ၇.၂၀ ၇.၉၇ ၄.၉ ၇.၈၅ ၈.၆၉ ၄.၉
4 ၉း၄၀ ၁၀.၄၁ ၆.၄ ၁၀.၂၅ ၁၁း၃၅ ၆.၄
5 ၁၄.၇ ၁၆.၃ ၁၀.၀ ၁၆.၀၂ ၁၇.၇၄ ၁၀.၀
6 ၂၁.၂ ၂၃.၄ ၁၄.၄ ၂၃.၀၇ ၂၅.၅၄ ၁၄.၄
7 ၂၈.၈ ၃၁.၉ ၁၉.၆ ၃၁း၄၀ ၃၄.၇၇ ၁၉.၆
8 ၃၇.၆ ၄၁.၆ ၂၅.၆ ၄၁၊၀၁ ၄၅.၄၁ ၂၅.၆
9 ၄၇.၆ ၅၂.၇ ၃၂.၄ ၅၁.၉၀ ၅၇.၄၇ ၃၂.၄
10 ၅၈.၈ ၆၅.၁ ၄၀.၀ ၆၄.၀၇ ၇၀.၉၅ ၄၀.၀
11 ၇၁.၁ ၇၈.၇ ၄၈.၄ ၇၇.၅၃ ၈၅.၈၅ ၄၈.၄
12 ၈၄.၆ ၉၃.၇ ၅၇.၆ ၉၂.၂၇ 102.17 ၅၇.၆
13 ၉၉.၃ ၁၁၀.၀ ၆၇.၆ ၁၀၈.၂၉ ၁၁၉.၉၁ ၆၇.၆
14 ၁၁၅.၂ ၁၂၇.၅ ၇၈.၄ ၁၂၅.၅၉ ၁၃၉၊၀၇ ၇၈.၄
15 ၁၃၂.၂ ၁၄၆.၄ 90.0 ၁၄၄.၁၇ ၁၅၉.၆၄ 90.0
16 150.4 ၁၆၆.၆ ၁၀၂.၄ 164.03 ၁၈၁.၆၄ ၁၀၂.၄
GB 8919-2006 အနီးစပ်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန်
3 ၅.၂ ၅.၈ ၃.၉ ၅.၂ ၅.၈ ၃.၆
4 ၉.၃ ၁၀.၃ ၆.၉ ၉.၃ ၁၀.၃ ၆.၄
5 ၁၄.၅ ၁၆.၁ ၁၀.၈ ၁၄.၅ ၁၆.၁ ၁၀.၀
6 20.9 ၂၃.၁ ၁၅.၅ 20.9 ၂၃.၁ ၁၄.၄
7 ၂၈.၄ ၃၁.၅ ၂၁.၁ ၂၈.၄ ၃၁.၅ ၁၉.၆
8 ၃၇.၂ ၄၁.၁ ၂၇.၅ ၃၇.၂ ၄၁.၁ ၂၅.၇
9 47.0 ၅၂.၁ ၃၄.၈ 47.0 ၅၂.၁ ၃၂.၅
10 ၅၈.၁ ၆၄.၃ 43.0 ၅၈.၁ ၆၄.၃ ၄၀.၁
11 ၇၀.၂ ၇၇.၈ ၅၂.၀ ၇၀.၂ ၇၇.၈ ၄၈.၅
12 ၈၃.၆ ၉၂.၆ ၆၁.၉ ၈၃.၆ ၉၂.၆ ၅၇.၇
13 ၉၈.၁ ၁၀၉ ၇၂.၇ ၉၈.၁ ၁၀၈.၆ ၆၇.၈
14 ၁၁၄ ၁၂၆ ၈၄.၃ ၁၁၄ ၁၂၆ ၇၈.၆
15 ၁၃၁ ၁၄၅ ၉၆.၈ ၁၃၁ ၁၄၅ 90.2
16 ၁၄၉ ၁၆၅ ၁၁၀.၁ ၁၄၉ ၁၆၅ ၁၀၂.၇
2. ဆွဲ၊ ဆွဲ၊ ထွားကျိုင်း။
3. ခြံစည်းရိုး၊ ဖန်လုံအိမ်၊ တံခါးပိုက်၊ အစိမ်းရောင်အိမ်။
4. Low pressure liquid, water, gas, oil, line pipe.
5. Indoor ရော Outdoor ရော အဆောက်အဦးအတွက်ပါ ဆောက်လုပ်ခြင်း။
6. များစွာစျေးသက်သာပြီး အဆင်ပြေသည့်ငြမ်းဆောက်လုပ်ရေးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
ထုပ်ပိုးမှု-သစ်သားရစ်လုံး၊ သံရစ်လုံး၊ ပလပ်စတစ်ရစ်လုံး၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရစ်ပတ်၊ စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှု။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း:သင်၏နမူနာအမှာစာအတွက် နိုင်ငံတကာအမြန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပါသည်- TNT၊ DHL၊ FedEx၊ UPS၊ EMS၊ စသည်တို့ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အများအပြားမှာယူမှုကို ပင်လယ်၊ ရထားဖြင့် စသည်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ထုတ်လုပ်ချိန်-အထဲမှာ 3-15 အလုပ်လုပ်ရက်.
ယခင်- တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အရည်အသွေးမြင့် 7X7 PVC Coated Galvanized Steel Wire Rope လက်ကားရောင်းချမှုအတွက် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအသစ်
နောက်တစ်ခု: လက်ကားစျေးနှုန်း China Steel Wire Rope, Non-Rotating Galvanized Wire Rope
7×19 သွပ်ရည်သုတ်စတီးလ်ကြိုး3mm-16 mm Hois...
သံမဏိကြိုး သံမဏိကြိုး သံမဏိဝါယာကြိုး r...
သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိကြိုး 1*7/1*19 သောင်တင်ထားသော...
သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး 7X7 သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး
ကြိုးခုန်တာ စမတ်ကျတယ်။, ကြိုးခုန်ဝယ်, ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး, ropeless skip ကြိုး, ခုန်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခုန်ကြိုး,